काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइसकेपछि...
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा वास्तविक क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनी एकपछि अर्को गर्दै साधारण शेयर बिक्रीमा केन्द्रित भइरहेका छन् । शिवम्...
काठमाडौँ -धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार मंगलबार नेप्से...
सिंगटी हाइड्रोपावरको आईपीओमा उच्च आकर्षण
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनी लिमिटेको साधारण शेयर (आईपीओ) मा उच्च आकर्षण देखिएको छ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री...
नेप्सेमा ६३ अङ्कको वृद्धि
काठमाडौँ -साताको पहिलो दिन आइतबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक...
सरकार र विश्व बैङ्कबीच वित्तीय सम्झौता
काठमाडौँ, विश्व बैङ्कले समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान दिने भएको छ । आयोजनाका लागि २.८ अर्ब रुपियाँ...
४३ अङ्कले बढ्यो नेप्से, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको कारोबार सबै भन्दा बढी !
काठमाडौँ - लगातार केही दिनपछिको ‘करेक्सन’पछि धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार झण्डै ४३ अङ्कले बढेको छ ।...
काठमाडौँ - नागरिक लगानी कोषले चालु आवको पुस मसान्तसम्म गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ८.५४ प्रतिशत नाफा कमाएको छ ।...
घट्यो वैदेशिक लगानी प्रस्ताव, कुन देशको कति?
काठमाडौँ ३ चैत । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको छ । नेपालमा...
किन घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ?
काठमाडौं । मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता रकम घटेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७...
ब्याजदर बढ्ने संकेत
काठमाडौँ - बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएसँगै ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको छ । कोरोना महामारीको असर कम हँुदै जाँदा बैंकहरुले...
काठमाडौँ -ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओमा आवेदनको रेकर्ड ब्रेक भएको छ । इन्स्योरेन्सको प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार इन्स्योरेन्सको आइपिओमा १८ लाख...
काठमाडौँ - धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम मंगलबार पनि जारी रह््यो । पछिल्ला दिनमा लगातार...
नेप्से: कारोबारका आधारमा नेपाल पूर्वाधार बैंक शीर्ष स्थानमा !
काठमाडौँ - धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से २१।५८...
सात अर्ब दुई करोडमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना
काठमाडौं । संघीय सरकारले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौँडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाएको छ । संघीय सरकारले...
नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्ने तयारीमा एनआरएन
काठमाडौँ १८ फागुन । प्रवासी नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी...
१८ करोड लगानीमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने
सिन्धुपाल्चोक । खानेपानीको अभाव रहेको सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकमा १८ करोड रुपैयाँ लगानीमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । निर्माणाधीन...
काठमाडौँ - नेपालमा दुई वर्षभित्र यही उत्पादित हाइड्रोजनले सवारी साधन चलाएर देखाउने गरी नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय आवश्यक...
नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीको नयाँ समूह थप
काठमाडौँ - नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कम्पनीको नयाँ समूह थप भएको छ । नेप्सेले अन्य समूहमा रहेका चार...
पूर्वक्षेत्रको केन्द्र मानिएको सुनसरीको इटहरी नगरपालिकाभित्र तरहरास्थित ‘इपि ल्याण्ड एण्ड वाटर पार्क’ को निर्माण सम्पन्न भएको छ। पूर्वप्रहरी अधिकृत प्रहरी अतिरिक्त...